Antaniavo, Antohomadinika : mbola vao tovolahikely ireo mpamaky trano 6 voasambotra | NewsMada
Antaniavo, Antohomadinika : mbola vao tovolahikely ireo mpamaky trano 6 voasambotra
Mpanao sinto-mahery, mpanendaka, mpamaky trano… Izany no talentan’ireto jiolahy enin-dahy voasambotry ny polisy avy ao amin’ny poste de police Antaniavo, ny asabotsy teo teny Antohomadinika. Eo amin’ny Dalle Ankazomanga no tena fanaovan’izy ireo ny asa ratsiny…Mbola vao tovolahikely ry zalahy ireto dia efa ikoizana.
Nidoboka am-ponja avokoa ireo jiolahy tratran’ny polisy ireo. Niainga avy amin’ny tatitra nataon’ny fokontany ao Ankazomanga noho ny fitarainana momba ny fisian’ireo andian-jiolahy mpanao sinto-mahery sy fanendahana miharo vaky trano no nahafahan’ny polisy ao Antaniavo nisambotra ireto jiolahy ireto. Maro, araka izany, ny fitarainana voarain’ny polisy ka taorian’izay no nanaovan’izy ireo hetsika manokana, ny asabotsy teo. Vokany, jiolahy miisa enina indray voasambotra teny amin’ny Dalle Ankazomanga tamin’io fotoana io izay nomarihin’ny polisy fa tsy ampy taona avokoa ny ankamaroan’izy ireo. Voalazan’ny polisy fa malaza ratsy amin’ny fanaovana sinto-mahery sy fanendahana eny Ankazomanga ry zalahy ireto. Isan-kariva manomboka amin’ny 8 ora alina, mody mijorojoro eo amin’ny Dalle Ankazomanga ny andian-jiolahy maromaro ka manendaka izay olona mandeha irery tratra hariva mandalo amin’iny toerana iny. Mitohy ihany ny asa ratsin’izy ireo ka rehefa alina ny andro mivadika mamaky trano indray ry zalahy ary efa betsaka ny olona tratra alina teny an-toerana no lasibatry ry zalahy ireto. Nanamafy rahateo ny polisy araka ny fitarainana voarain’izy ireo fa maro ireo olona mahafantatra ireto jiolahy ireto.
Manao sinto-mahery mandritra ny fitohanan’ny fifamoivoizana amin’iny Ankazomanga iny koa ireto jiolahy ireto.
Nilaza ry zalahy nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa efa ela no nanao ity asa ratsy ity, saingy izao kosa vao tratra. Folo lahy izy ireo no miaraka fa enina no tratra.
Vaomieran’ny fokontany miray tsikombakomba amin’ny jiolahy
Fa tratran’ny polisy teny Antohomadinika, ny asabotsy teo ko ny jiolahy iray sy ny vaomieran’ny fokontany eny an-toerana izay miray tsikombakomba amin’ilay jiolahy. Nilaza ilay jiolahy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa efa indroa nigadra teny Antanimora noho ny fanaovana sinto-mahery. Isaky ny mivoaka ny fonja izy, manohy ny asa ratsiny hatrany. Efa nokarohin’ny polisy hatry ny ela izy satria maro ny fitarainana tonga teo am-pelatanan’izy ireo. Firaisana tsikombakomba amin’ny jiolahy no niampangana ilay vaomieran’ny fokontany. Tsy azo antoka intsony!